PEN Myanmar ဆိုတာ… |
ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလား →
Posted on November 22, 2013 by mamyathway
Number of View: 5345
အခုတလော PEN Myanmarနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေက စာရေးသူတွေ၊ စာချစ်သူတွေအကြား ဟိုနားတစ်စ၊ သည်နားတစ်စနဲ့ ပျံ့နေခဲ့ပါတယ်။ ပရင့်မဂ္ဂဇင်းတွေ ဂျာနယ်တွေသာမက အွန်လိုင်းပေါ်မှာပါ PEN Myanmarနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေရောက်လာပြီး၊ ပြန်လည်မျှဝေဖြစ်တဲ့အခါ စိတ်ဝင်စားလို့ မေးခွန်းတွေ မေးလာတဲ့ သူတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့၊ အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့မှာ PEN Myanmarရဲ့ BOD (၉)ဦးနဲ့ ကော်မတီဝင်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် PEN Myanmarဆိုတာ ဘာလဲ၊ PEN Myanmarက ဘာတွေများ လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကို သိချင်နေသူများ၊ PEN Myanmarမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လိုသူများ သေသေချာချာ သိရအောင် PEN Myanmar Working Committeerရဲ့ သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးမှာ ပါဝင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စုဆောင်းထားတဲ့ အချက်အလက်များကို PEN Myanmar ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။
PEN International ဆိုတာ..။
PEN Myanmarအကြောင်းမပြောခင် PEN Internationalနဲ့ အရင်ထိတွေ့ပေးချင် ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ သိရှိလက်ခံထားတဲ့ PEN Internationalဟာ ၁၉၂၁ခုနှစ် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့မှာ Poets, Playwrights, Editors, Essayistsနဲ့ Novelistsကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ PENဆိုတဲ့အမည်နဲ့ စတင်အခြေပြုခဲ့ပြီး၊ စာရေးဆရာ ပြဇာတ်ရေးသူ ကဗျာဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ Mrs C.A. Dawson Scott ဆိုသူက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ PENဟာ ကမ္ဘာ့အစောဆုံး အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း (Non-Government Organization) တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စာရေးဆရာများအချင်းချင်းအကြား နားလည်မှုနဲ့တကွ အသိပညာအချင်းချင်း ပူးပေါင်း ဖလှယ်မှု တိုးမြှင့်စေရန် ။
ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်း ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် စာပေသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ အရေးပါကြောင်းကို ပိုမိုအာရုံ စိုက်လာစေရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာရေးဆရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရန်။
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံနေကြရတဲ့ စာပေလောက ရှင်သန်ရပ်တည်ခြင်းကို ကာကွယ်သွားနိုင်ရန်။
…စတဲ့ အချက်တွေက PEN ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
PENကို စတင်ထူထောင်ချိန်မှစပြီး (၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ဥရောပတစ်ဝန်းမှာ PEN Centreပေါင်း(၂၅)ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ ၁၉၃၁ခုနှစ်မှာ တောင်အမေရိကနဲ့ တရုပ်နိုင်ငံ တို့မှာလည်း PEN Centreပေါင်း မြောက်များစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃၉ခုနှစ်မှာ Argentia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Egypt, India, Japan, Mexico, New Zealand, Palestine, Uruguay, USAတို့နဲ့အတူ အခြားနိုင်ငံပေါင်းများစွာ PENအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ယခုအခါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ(၁၀၁) နိုင်ငံမှာ PEN Centresပေါင်း (၁၄၀)အထိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် PEN International လို့ အမည်ပြန်လည် ခေါ်တွင်စေပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာရှိတဲ့ စာရေးဆရာများအတွက် “လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ခွင့် (Freedom of Expression)၊ ငြိမ်းချမ်းရေး (Peace)နှင့် ရင်းနှီးချစ်ခင်မှု (Friendship)” တို့ကို အခြေခံကာ ကမ္ဘာအနှံ့မှ စာရေးဆရာများရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
PEN International နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှ စာရေးဆရာများ ဘယ်လို ဆက်သွယ်မိကြသလဲ။
PEN Internationalနဲ့ မြန်မာစာရေးဆရာများ စတင် ထိတွေ့ရခဲ့ချိန်ကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ စာရေးဆရာများ နိုင်ငံရေးပုဒ်မနဲ့ အကျဉ်းကျခံနေရချိန် PEN Internationalမှ ဦးစီးပြီး အခြားနိုင်ငံများရှိ PEN Memberများ အားလုံးက မြန်မာစာရေးဆရာများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အားတက်သရော ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဟာ PEN Myanmar စတင်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ PEN International က မြန်မာနိုင်ငံမှ အကျဉ်းကျ စာရေးဆရာများ လွတ်မြောက်မှုအတွက် အစဉ်တစိုက် ဖိအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သိသလောက် မြန်မာနိုင်ငံက အကျဉ်းကျခံခဲ့ရဘူးတဲ့ စာရေးဆရာများဖြစ်တဲ့ ဆရာမျိုးမြင့်ညိမ်း၊ ဆရာမင်းလူ၊ ဆရာမ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)တို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမ မသီတာ(စမ်းချောင်း)(၁၉၉၅)၊ ဆရာ ဖျာပုံနီလုံဦး(၂၀၀၂)နဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ် (၂၀၀၉)တို့ PEN Freedom to write Barbara Goldsmith award ဆုများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
PEN Myanmar အစ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာရှင်စံနစ်မှ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ကူးပြောင်းပြီးချိန်နောက်ပိုင်း စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ရရှိလာတဲ့ ဒီကနေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာရေးဆရာများအရေးကို အမြဲမျက်ခြေမပြတ်ခဲ့တဲ့ PEN Internationalနဲ့ ဆရာမသီတာ(စမ်းချောင်း)တို့ PEN Myanmarအတွက် ပြန်လည်ဆက်သွယ်မိပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ PEN Myanmar အသက်ဝင်လာစေဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ စတင်ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။
PEN Internationalရဲ့ နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဂရက်မတိုင်မီ လပိုင်းအလိုမှာ PEN Internationalရဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိ အပါအ၀င်၊ အခြားနိုင်ငံများမှ PEN အဖွဲ့ဝင်အချို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာခဲ့ကြပြီး ညီလာခံအမီ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လိုအပ်တာပြင်ဆင်ပြီး PEN Myanmar အဖြစ် တရားဝင်ဖွဲ့စည်းစေလိုကြောင်း၊ အဲ့ဒီလို ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ PEN Internationalရဲ့ ကွန်ဂရက်မှာ PEN Myanmar ဖွဲ့စည်းဖို့ ပြင်ဆင်နေတာများကို လာရောက်တင်ပြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြား လာပါတယ်။
ကွန်ဂရက်အမီ ရတဲ့အချိန်ကာလတိုလေးအတွင်းမှာ စာရေးဆရာများရဲ့လက်မှတ်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေး စတာတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရယူလုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်မရတော့တာမို့၊ ယာယီWorking Committeeကို ဆရာမ မသီတာ(စမ်းချောင်း)အပါအ၀င် (၂၅)ဦးနဲ့ အလျင်အမြန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။၊ ကွန်ဂရက်အမီ ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကို ယာယီWorking Committeeပါ အဖွဲ့ဝင်များမှ PEN Internationalမှ ပေးပို့လာတဲ့ မူပေါ်အခြေပြုပြီး ၀ိုင်းဝန်းညှိနှိုင်းရေးဆွဲကာ ကွန်ဂရက်တင်ဖို့ အရင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိကကတော့ PEN Myanmar ပေါ်ပေါက်လာဖို့ နောက်နှစ် ကွန်ဂရက် ကျင်းပချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းမနေချင်တော့ပဲ ဒီ၂၀၁၃နှစ်ကွန်ဂရက်မှာ အချိန်မီ တင်သွင်းနိုင်ဖို့ အရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ ခွင့်ပြုချက်ကျလာပြီးနောက်ပိုင်းမှ PEN Myanmarညီလာခံကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပကာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မတီဝင်များအား အများဆန္ဒဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
PEN Myanmar အဖြစ် ခွင့်ပြုပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၉.၉.၂၀၁၃ မှ ၁၃.၉.၂၀၁၃အထိ Iceland နိုင်ငံ၊ Reykjavikမြို့လေးမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ PEN Internationalရဲ့ (၇၉)ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်ကို PEN Americanမှ ပေးအပ်တဲ့ဆုကို ရရှိထားတဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်က မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ PEN Myanmar ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ရာမှာ ကွန်ဂရက်ကျင်းပစဉ် ရက်ပိုင်းအတွင်း အခြား PENနိုင်ငံများရဲ့ မဲပေးထောက်ခံမှုနဲ့ PEN Myanmarဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ ချက်ချင်းပင် ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် အကြောင်းကြားစာကိုတော့ ၃.၁၀.၂၀၁၃နေ့မှာ ထပ်မံ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“လွတ်လပ်စွာရေးသား ထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် သစ်လွင်သော စာပေယဉ်ကျေးမှု ပေါ်ထွန်းလာစေရန်” ဆိုတာက PEN Myanmar ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး၊ PEN Myanmar ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ -
(၃)ကျောင်းပညာရေးနှင့် ရသစာပေကို ပေါင်းကူးဆက်စပ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်..တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
PEN Myanmar အဖြစ် ခွင့်ပြုပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ရန်များ။
PEN Myanmarအဖြစ် ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက် အများဆန္ဒနဲ့ BODနဲ့ ကော်မတီဝင်များ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ဖိုနဲ့ ညီလာခံကျင်းပဖို့ကို ပထမဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး (၁၇.၁၀.၂၀၁၃)နေ့မှာ စာရေးဆရာများ၊ မီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံရန့် သတင်းစာမှတဆင့် အသိပေးဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာလဲ မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ ရှိတဲ့ စာရေးဆရာများ သိနိုင်ရန် သတင်းဆောင်းပါးများအား သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများမှတဆင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီများကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တာဝန်များ ခွဲဝေယူကြပါတယ်။ PEN Myanmarရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကိုလဲ ၂၇.၁၁.၂၀၁၃ – အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့မှာ ပြုလုပ်ဖို့ သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ အလွှာ၅ခုဖြစ်တဲ့ ရသ၀တ္တု (၂)ဦး၊ ကဗျာ (၂)ဦး၊ ထုတ်ဝေသူ (၂)ဦး၊ အယ်ဒီတာ (၂)ဦး၊ အွန်လိုင်း (၁)ဦး – စုစုပေါင်း (၉)ဦး ပါဝင်တဲ့ BODနဲ့ ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မတီများကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း(၅)ရပ်ဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
၁။ ဘာသာပြန်နှင့် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး ကော်မတီ။
(Translation & Linguistic Rights Committee)
( Women Writers Committee)
၃။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စာရေးဆရာများ ကော်မတီ။
( Writers for Peace Committee)
၄။ ထောင်တွင်းစာရေးဆရာများ ကော်မတီ။
(Writers in Prison)
၅။ PEN Myanmar၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် ကော်မတီ။
PEN Myanmarနဲ့ အခြားစာပေဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များရဲ့ ကွာခြားမှု
PEN Myanmarဟာ PEN International ရဲ့ Family Memberဖြစ်ပြီး၊ PENရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ မူ၊ ၀ါဒ၊ ခံယူချက်များ၊ ပဋိညာဉ်များကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် မိမိရဲ့ လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒအရ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ PEN Myanmarဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စာရေးဆရာများ အားလုံးကိုသော်၎င်း၊ အခြား အသင်းအဖွဲ့များ၊ သမဂ္ဂများမှ စာရေးဆရာများအားလုံးကိုသော်၎င်း၊ ကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ တခြား စာပေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုမှာ ရာထူးတာဝန်တစ်ခုခုယူထားသူများသည်လည်း PEN Myanmar မှာ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့ဝင် (သို့) ဧည့်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့် Director Board အဖွဲ့ဝင် (BOD)အဖြစ်တော့ ရွေးချယ်ခံခွင့် မရှိပါဘူး။
PEN Myanmar မှ PEN International ကို နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းရသလို၊ PEN Myanmar အဖွဲ့ဝင်တိုင်းကလဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ကြေး လစဉ်ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။ လစဉ်အဖွဲ့ဝင်ကြေးကို လောလောဆည် တစ်လ ၃၀၀၀ကျပ် သတ်မှတ်ထာပြီး၊ ဧည့်အဖွဲ့ဝင်များကို တစ်လ ၁၀၀၀ကျပ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ၂၇.၁၁.၂၀၁၃နေ့မှာ ကျင်းပမဲ့ PEN Myanmar ညီလာခံမှာ အဖွဲ့ဝင်ကြေးအတိအကျကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားသူများအား BODမှ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပြီးချိန်မှ အဖွဲ့ဝင်ကြေး စတင်ပေးသွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်ခံရရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ကြေးများဖြင့် PEN International သို့ နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းသွားမှာဖြစ်သည့်အပြင်၊ လစဉ်လှုပ်ရှားမှုများမရှိတဲ့ PENနိုင်ငံများကို PEN Internationalမှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်မှ ရပ်တံ့ခွင့်ရှိနေတာကြောင့် အဖွဲ့ရဲ့ လစဉ်လှုပ်ရှားမှုများ အတွက်လဲ အဖွဲ့ဝင်ကြေးများမှ သုံးစွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ စာရင်းအဖွဲ့မှ ပွင့်လင်းမြင်သာ ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စေ၊ ဧည့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်စေ တင်သွင်းလာတဲ့ Member Formများကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားတဲ့ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ စီစစ်ရွေးချယ်ပြီးမှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လက်ခံပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမဲ့သူများက အောက်ပါအချက်များနဲ့ ကိုက်ညီရပါမယ်။
၁။ ယခုလက်ရှိ စာရေးနေသူဖြစ်ရပါမယ်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်လွှာ တင်သွင်းတဲ့ နေ့ရက် မတိုင်မီ တစ်နှစ်အတွင်း စာပေလက်ရာတစ်ခုခုကို အများပြည်သူဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ မီဒီယာတစ်ခုခုမှာ ဖော်ပြ ပါရှိပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။
၂။ တည်းဖြတ်သူရှိတဲ့ မီဒီယာများမှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ လက်ရာများအားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ်တိုင်တည်းဖြတ်တဲ့ မီဒီယာများမှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ လက်ရာများဖြစ်ပါက စာပေလက်ရာရဲ့ အရည်အသွေးပေါ်မူတည်ပြီး BOD ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ အတည်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ အများပြည်သူဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ မီဒီယာဆိုရာမှာ ပုံနှိပ်နဲ့အီလက်ထရောနစ် မီဒီယာများအားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
စာရေးသူတွေမဟုတ်ပေမယ့် အဖွဲ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ပါဝင်ချင်သူများကိုလည်း ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ ဧည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ စာအုပ်စာပေ ရပ်ဝန်းမှစိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ စာချစ်သူအဖွဲ့များနဲ့ ကျောင်းသားတချို့ အကျုံးဝင်မှာပါ။ ကျောင်းသားများဟာ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ ဖြစ်တဲ့အပြင်၊ ကျောင်းနံရံကပ် စာစောင်များမှာ လည်း စာတည်းများရှိတဲ့အတွက် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခြွင်းချက်ထား သတ်မှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PENရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအရ ဧည့်အဖွဲ့ဝင်များက Director Boardအဖွဲ့တို့၊ အခြား လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ကို မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပေမဲ၊့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ Boardအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံခွင့် မရှိပါဘူး။ သို့သော် အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင် အားဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
PEN Myanmar ညီလာခံကျင်းပမဲ့ ၂၆.၁၁.၂၀၁၃နေ့အထိ အောက်ပါလိပ်စာသို့ အဖွဲ့ဝင်ပုံစံများကို ပတ်စပို့ဆိုဒ်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံနှင့်အတူလျှာက်လွှာတင်နိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်လျှာက်လွှာများကို
ရွေးကောက်ပွဲနေ့မနက်(၉း၃၀)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်လွှာ တင်နိုင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာများကို BODအဖွဲ့မှ စီစစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကိုက်ညီသူများကို ညီလာခံနေ့ရက် နောက်ပိုင်းမှာ ကြေညာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
PEN Myanmar (ယာယီ) လိပ်စာ။
အခန်း(၄၀၁)၊ တိုက်အမှတ် (၁၇)၊ ၅၂လမ်း (အောက်)၊
PEN International Website: http://www.pen-international.org
PEN Myanmar အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လိုသူများအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံကို ဤနေရာမှရယူပါ။
PEN Myanmar ရွေးကောက်ပွဲ
PEN Myanmar ရွေးကောက်ပွဲကို အာရှပလာဇာဟိုတယ်မှာ ၂၇.၁၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့၊ မနက် (၉း၀၀)မှ ညနေ(၅း၀၀)အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ နယ်ဝေးမှ စာရေးဆရာများ ပါဝင်Voteလုပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်း စီစဉ်နေပါတယ်။ ညီလာခံအတွက် ဖိတ်စာကိုတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းလိုက်ဖိတ်မနေတော့ပဲ သတင်းစာကနေ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကြေညာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင်တော့ PEN Myanmarဟာ အခုအခါမှာ ကမ္ဘာအနှံ့က PEN Centerတွေရဲ့ Networkမှာရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ မကြာမီအချိန်ကာလမှာ အများရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ ရွေးကောက်ခံရမယ့် BODနဲ့ ကော်မတီဝင်များ ပေါ်ပေါက်လာတော့မှာပါ။ PEN Myanmarရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်အလက်များက PEN International ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားပါတယ်။
PEN Myanmarမှာ နယ်မှ ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှဖြစ်စေ မြန်မာစာရေးဆရာများအားလုံး ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား သာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားပြီး၊ စာတည်းရှိတဲ့ နယ်ပယ်မျိုးမှာ ရေးသားနေတဲ့ မည်သည့်တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား ရေးသားသူကိုမဆို BOD၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပါဝင်ခွင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
PEN Myanmarဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်သူ ဆရာ/ဆရာမများ
PEN Myanmar အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သင်သာဖြစ်ခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာရဲ့စာပေဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှုများကို သိလာနိုင်သလို၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ထားတဲ့ မိမိရဲ့ရသစာပေ လက်ရာများကို ကာကွယ်ခွင့်ရလာပါမယ်။ ဒါ့အပြင် အဖွဲ့ဝင် စာရေးဆရာများအချင်းချင်း ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာနဲ့ စာပေရေးရာလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုများကို အတူတကွဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် PEN International အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် သင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ခွင့်ရလာ ပါလိမ့်မယ်။
မိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ လွတ်လပ်စွာပါဝင်လာတဲ့ စာရေးသူများဟာ PEN Myanmarရဲ့ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်လာတာနဲ့အညီ၊ PEN Myanmarရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရပ်တည်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အတူတကွ ၀ိုင်းဝန်းအကောင်အထည်ဖော်ခွင့် ရလာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားကြသူ စာရေးဆရာများသာမက စာပေချစ်သူများကိုပါ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါတယ်။
(ဒီဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ အချက်အလက်များက PEN Myanmareနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ updateသတင်းမှန် သမျှတင်ပေးနေတဲ့ PEN Myanmarရဲ့ facebook Fan Pageမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
“PEN Myanmar နှင့် သက်ဆိုင်သည့် လင့်ခ်များ”
PEN Myanmar၏ Website
PEN Myanmar’s facebook Fan Page
PEN Myanmar၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်း
PEN Myanmarဆိုင်ရာအမေးအဖြေများ (FAQ)
PEN Myanmar လျှောက်လွှာပုံစံ
This entry was posted in PEN Myanmar. Bookmark the permalink.
5 Responses to PEN Myanmar ဆိုတာ…
PEN Myanmar ကိုသေသေချာချာသိလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါအမမြသွေး
အခုလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မမြသွေးရေ…။
ခရီးတွေများနေတာနဲ့ အခုမှေ၇ာက်ဖြစ်တယ်ဗျို့း)
အသေးစိတ်လေးရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မြသွေးရေ…
တီတင့်လဲ ခရီးတွေ ဂတီးဂတီးသွားနေရလို့ စုစုပြီးဖတ်ရတယ် …
ဧရာဝတီကို စောင့်ရှောက်ကြကုန်လော့… - 45823 hits